रकमान्तर गरी बजेट प्रमुखको घर जाने बाटोमा | रुपान्तरण
रकमान्तर गरी बजेट प्रमुखको घर जाने बाटोमा
१९ असार २०७६, बिहीबार १८:४०
गाउँपालिका प्रमुख अन्जार आलमको घर अगाडीबाट पाठामारी जाने कच्ची सडक जसको स्तरोन्नती हुँदै छ ।
भद्रपुर । तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तरगत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कृषिबजार निर्माणको लागि उपलब्ध रकमले कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अञ्जार आलमले ससुराली जाने सडक निर्माण गरेका छन । आलमको घर कचनकबल ६ को वडाबस्तीमा पर्छ । आलमले पाठामारी जाने सडकको फुलबारी खण्डसम्म त्यो रकम स्तरोन्नतिमा खर्चेका हुन् । रकमान्तरका लागि गत माघमा बसेको गाउँसभाको बहुमतले स्वीकृति दिएको भनि गाउँपालिकाको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
दुई तलाको शपिङ्ग कम्प्लेक्स बनाउनका लागि नेकपाका स्थानिय नेताहरुले बजेटको लागि पहल गरे । बजेट पनि आयो— एक करोड रुपैँयाको । तर रातारात उक्त बजेट कता पुर्याइयो बनियानिका जनतालाई पत्तो भएन ।
बजारको २२ कठ्ठा जग्गामध्ये सात कठ्ठा अतिक्रमणमा परेको छ । दुई कठ्ठामा मात्र कम्प्लेक्स बनाउने तयारी थियो । तर गाउँपालिकाको बहुमतबाट अन्तै बजेट विनियोजन गरियो ।
बजार व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष देउमान बुढाथोकीका अनुसार १० कठ्ठा जग्गा बाँकी छ । ‘एकाएक सपिङ्ग कम्पलेक्स बनाउन प्रशस्त जग्गा छैन भन्ने बहानामा बजेट कता लगियो केही थाहा भएन,’ बुढाथोकीले भने ‘बजारलाई व्यवस्थित बनाउन चाहान्थ्यौँ तर गाउँपालिकाले बजेट आफ्नो प्रभावशाली क्षेत्रमा खन्याए ।’
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्र्तगत आएको एक करोड रुपैँया र गाउँपालिकाले १० लाख गरी एक करोड १० लाख रकम शपिङ्ग कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने गरी गाउँपालिकाकै खातामा आएको थियो । गाउँपालिकामा रहेको हटिया बजारको स्तरोन्नतिका लागि नेकपाका उक्त क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य बसन्त बानियाको पहलमा बजेट माग गरिएको थियो । बजेट गाउँपालिकामा आएपछि क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले उक्त बजेट रकम बिनियोजनबारे असहमति राख्दै खर्चगर्ने ठाँउ नभएको बताएका थिए । “१० लाख मागेको १ करोड दिइएछ, यो कार्यकर्ता पोस्नका लागि छुट्याएको हो, सांसद लिङदेनले गएको मंसीरमा संसदको बैठकमा भनेका थिए, यो रकम कसरी गयो ? संघीयता बिरोधी म मात्र छु यहाँ भन्ने सोचेको थिएँ, मन्त्री पनि हुनुहुदो रहेछ, ।” सांसद लिङदेनले बिनियोजित रकम फिर्ता नगरे अनसन बस्नेसम्मको चेतावनी संसदमा दिएका थिए ।
कृषि बजारको तस्विर
कृषि बजारमा आवश्यक नरहेको भन्दै संसदमा विरोध गरेपछि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बस्यो । बैठकले २५ लाख रुपैँया उक्त बजार व्यवस्थापनलाई र बाँकी ८५ लाख रुपैँया सडक स्तरोन्नकि लागि रकमान्तर गरिएको गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख तुलाराम थापाले बताए ।
उक्त बजेट बाट २५ लाख भन्दा साना आयोजना बनाउन नपाईने प्रावधान रहेको छ । त्यसैले कालो पत्रे सडक मात्र बनाउने सहमती भयो । सिग्मीबारीदेखि बनियानी जोड्ने सडकमा ८५ लाख रुपैँया हालीएको थापाले उल्लेख गरे ।
सिग्मीबारी देखि बनियानी जोड्ने बाटोमा पहिलानै गाउँपालीकाले आफ्नो आन्तरीक बजेट बाट ८८ लाख रुपैँया बजेट छट्टाएको थियो । कृषि तथा हटिया बजार व्यवस्थापनको लागि नेकपाका उक्त क्षेत्रका नेता र स्थानीय उपभोक्ता समितिको पहलमा आएको पैसा बाट ८५ लाख पीच गर्ने भनेर गाउँपालिकाले आफ्नो बजेट हालेकै ठाउँमा उक्त रकम छुट्यायो ।
गाँउपालिकाले सरकार र आन्तरिक स्रोतको १ करोड १० लाख रुपैयाँबाट २५ लाख रुपैयाँ खर्चेर बजारमा तीनवटा टहरा निर्माण गर्दै छ । बाँकी ८५ लाख रुपैंयाँले वडागाउँ–पाठामारी सडकमा ग्राभेल गरेको बताएको छ । संघीय सरकारको प्रावधान अनुसार उक्त रकमले कच्ची सडक निर्माण गर्न मिल्दैन । उक्त प्रावधान थाहापाए पश्चात गाउँपालिकाले पहिले ठेक्का लागि सकेको सडकका रकम बिनियोजन गरेको देखाउँदै अध्यक्ष आलमको ससुराली जाने सडक स्तरोन्नती गरेको स्थानीयको आरोप छ । त्यसो त गाउँपालिकामा राप्रपाको बहुमत छ । जता मन लाग्छ उतै बजेट सार्ने काम गाउँपालिकाको बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिले गर्ने गरेका छन् । न त्यहाँ जनताको बोलि सुनिन्छ । कृषि बजार उपभोक्ता बाट पहल गरेर ल्याइएको बजेट पनि कता नचाइन्छ पत्तो नपाईने कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि तोप भट्टराईले भने ।
यस बारेमा बोल्दै गाउँपालिका प्रमुख अन्जार आलमले हचुवाका भरमा बजेट खन्याईएको छैन भनेका छन् । कचनकवलको साविक ३ वटा वडा मिलेर ५ नम्बर वडा बनेको हो । त्यहाँ मुस्लिम, गणेश, राजबंशी बस्तीहरु छन् । जनसंख्याको हिसाबले करिब ५ हजार जना उक्त बाटो बाट लाभान्वीत हुने छन् । त्यो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्र छ । एकदमै जिर्ण भएको क्षेत्र हो । आजसम्म कसैको ध्यान गएको थिएन । त्यहाँ मेरो घर नपरेको भए सायद बिरोध हुने थिएन । मेरो गाउँतिर विकास गर्नै नहुने हो ? उनले भने । तेस्रो गाउँ सभा बाट सिग्नीबारी बनियानीमा रहेको बजेट वडाबस्ती देखि पाठामारी सम्मको बाटोमा सारेर सिग्नीबारी तिर तराई मधेश समृद्वि कार्यक्रमको बजेट पारीत गरिएको आलमले बताए ।